China Aluminium CNC yekuchinja zvikamu Zvakarurama Milling muchina cnc zvikamu zvemuchina basa fekitori uye vagadziri Weldo
Aluminium CNC inoshandura zvikamu Precision Kugaya muchina cnc zvikamu zvemuchina basa
Cnc kutendeuka zvikamu, cnc lathe zvikamu
Zingi / nickel / chrome kupenda, kupisa kwakakurudzira, kupenda,
poda kupfeka, Anodize Oxidation, kana nemavara: sesirivheri, bhuruu, tsvuku, nezvimwewo kupora, electrolytic polishing, yakanyura isina magetsi nickel zvichingodaro.
Inoshandiswa zvikuru mukugadzira, Medical Instruments / Electronic / Industrial // Automation / mudhudhudhu / 3D kudhinda uye mamwe maindasitiri.
1) Zvezvishongedzo zvigadzirwa, izvo zvigadzirwa zvine runako chitarisiko, CNC zvikamu, Tichashandisa Anti-kukwesheni kurongedza uye anti-kukanda package.Like diki bhegi, blister tireyi, furo kurongedza, chipanje kurongedza etc.
2) Kana zvinoenderana nechengetedzo zvinodiwa nevatengi.
Kazhinji, edu ekubhadhara mazwi ndeye TT 50% yakabhadharwa uye chiyero TT 50% usati wasununguka. Pamari shoma, 100% yakabhadharwa kuburikidza neTT kana Paypal .Mitemo yekubhadhara inogona kukurukurwa nemapato ese.
1:Fekitori yakananga kutengeswa, ine mhando yakanaka uye mutengo unonzwisisika.
3: Zvekuungana: Tine nyanzvi yekuunganidza dhipatimendi, nekuti fekitori yedu inogadzirawo zvigadzirwa, zvinogona kupa kuungana uye kugadzirisa basa rako.
4: Yemhando: Isu tine ISO standard, uye nePND yekugadzira uye manejimendi sisitimu, chikamu chega chega chichava bvunzo uye cheki usati watumirwa.
5: Yezve MOQ: yedu MOQ ndeye 1 chidimbu.
6: Yenguva yekugadzira: Kurumidza kutungamira nguva. Samples: 5-7days, kugadzirwa kwakawanda: 10-30days maererano nehuwandu.
7: YeR logo: yakagadzirirwa Logo inowanikwa ne laser yekumaka.
8: Yebasa: Isu tinogadzira zvikamu zvinoenderana nekudhirowa zvakanyanya, uye nekupa yakanaka afterervice.
Pashure: OEM zvigadzirwa mutengesi yakanaka mhando cnc machine masevhisi
Zvadaro: Yakasarudzika Kugadzira Mechina Zvikamu Kubva Kubva Dhirowa CNC Kutendeuka Chikamu
Vashandi veVatengi uye murume wekutengesa vane moyo murefu uye vese vakanaka kuChirungu, kusvika kwechigadzirwa zvakare kwakakodzera nguva, mutengesi akanaka.
NaPaula anobva kuCannes - 2018.11.02 11:11
Sekambani yekutengeserana yepasi rese, isu tine vakawanda vatinoshanda navo, asi nezve yako kambani, ini ndinongoda kutaura, iwe wakanaka chaizvo, hwakawanda, mhando yakanaka, mitengo inonzwisisika, inodziya uye inofungisisa sevhisi, tekinoroji yepamusoro uye zvishandiso uye vashandi vane hunyanzvi hwekudzidzisa , Mhinduro uye chigadzirwa gadziriso iri panguva, muchidimbu, uku kubatana kunofadza kwazvo, uye tinotarisira kubatana kunotevera!
NaCarol vanobva kuChile - 2018.12.25 12:43
Custom-hwokugaya hwakabvira Machine-Brass-machine-CNC-Lath ...